Ghost Whisperer (2005) Season2– M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
5 Seasons 107 Episodes
Original nameGhost Whisperer
Created byJohn Gray
StarringCamryn Manheim, Christoph Sanders, Connor Gibbs, David Conrad, Jamie Kennedy, Jennifer Love Hewitt
Synopsis of Ghost Whisperer (2005) Season 2
ငယျတုနျးက DVD စကျတှနေဲ့ ကွညျ့ခဲ့ရတဲ့ Ghost Whisperer လေးကို Channel M-SUB ကနပွေနျပီးတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ဒီဇာတျလမျးတှဲလေးကတော့ တျောတျောမြားမြားသိကတြဲ့အတိုငျး မငျးသမီးက သဆေုံးပီးဖွဈတဲ့သူတှကေို မွငျရပီး သူ့တို့ရဲ့ နောကျဆုံး ဆန်ဒ တှကေိုဖွညျ့စီးပေးဖို့ဖွဈလာတဲ့ အခါမှာ ဘယျလိုအခကျအခဲတှရေငျဆိုငျရမလဲ ? သဆေုံးသှားတဲ့အခါ ကနျြရဈသူတှကေို ဘယျလို Message တှပေေးခငျြကတြာလဲ ? ကနျြရဈတဲ့မိသားစုကကော သဆေုံးသှားတဲ့သူတှအေပျေါ ဘာတှပွေောခငျြကလြဲ ဘယျလိုခံစားခကျြတှရှေိလဲဆိုတာကို စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲလေးဖွဈပါတယျ။ မကွညျ့ဖူးသူတှကေော ကွညျ့ဖူးပီး Quality ကောငျးကောငျးနဲ့ ပွနျကွညျ့ခငျြသူတှအေတှကျပါ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ
ဒီ Series ကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Lucas Wang ဖွဈပါတယျ
ငယ်တုန်းက DVD စက်တွေနဲ့ ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ Ghost Whisperer လေးကို Channel M-SUB ကနေပြန်ပီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ တော်တော်များများသိကျတဲ့အတိုင်း မင်းသမီးက သေဆုံးပီးဖြစ်တဲ့သူတွေကို မြင်ရပီး သူ့တို့ရဲ့ နောက်ဆုံး ဆန္ဒ တွေကိုဖြည့်စီးပေးဖို့ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရမလဲ ? သေဆုံးသွားတဲ့အခါ ကျန်ရစ်သူတွေကို ဘယ်လို Message တွေပေးချင်ကျတာလဲ ? ကျန်ရစ်တဲ့မိသားစုကကော သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေအပေါ် ဘာတွေပြောချင်ကျလဲ ဘယ်လိုခံစားချက်တွေရှိလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ မကြည့်ဖူးသူတွေကော ကြည့်ဖူးပီး Quality ကောင်းကောင်းနဲ့ ပြန်ကြည့်ချင်သူတွေအတွက်ပါ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Lucas Wang ဖြစ်ပါတယ်
Firt air date2005-09-23
Last air date2010-05-21
Home PageGhost Whisperer (2005) Season 2
The Originals (2013) Season2Complete
Empress Ki (2013) Complete